4 Ụmụ Izrel wee malite ọzọ ime ihe jọrọ njọ n’anya Jehova ugbu a Ihọd nwụrụ.+
2 Ya mere, Jehova weere ha resi+ Jebin eze Kenan, onye chịrị na Hezọ;+ onyeisi ndị agha ya bụ Sisera,+ o bikwa na Haroshet+ nke ndị mba ọzọ.
3 Ụmụ Izrel wee malite itiku Jehova,+ n’ihi na o nwere narị ụgbọ ịnyịnya agha itoolu ndị nwere mma,+ ya onwe ya kwa ji aka ike megbuo ụmụ Izrel+ ruo afọ iri abụọ.
4 Debora, onye amụma nwaanyị,+ nwunye Lapidọt, bụ onyeikpe Izrel n’oge ahụ.
5 O bikwa n’okpuru nkwụ Debora n’agbata Rema+ na Betel+ n’ógbè Ifrem bụ́ ugwu ugwu; ụmụ Izrel na-agakwurukwa ya ka o kpeere ha ikpe.
6 O wee zie ozi ka a gaa Kidesh-naftalaị+ kpọọ Berak+ nwa Abinoam, o wee sị ya: “Ọ̀ bụ na Jehova bụ́ Chineke Izrel enyeghị gị iwu, sị, ‘Gaa gbasaa onwe gị n’Ugwu Tebọ,+ sikwa n’etiti ụmụ Naftalaị+ nakwa n’etiti ụmụ Zebulọn+ kpọrọ puku ndị ikom iri’?
7 ‘M ga-adọtakwara gị+ Sisera+ onyeisi ndị agha Jebin+ na ụgbọ ịnyịnya agha ya na ìgwè ndị agha ya n’iyi ndagwurugwu Kaịshọn,+ m ga-enyefekwa ya n’aka gị.’”+
8 Berak wee sị ya: “Ọ bụrụ na ị ga-eso m gaa, mụ onwe m ga-aga; ma ọ bụrụ na ị gaghị eso m gaa, agaghị m aga.”
9 O wee sị: “M ga-eso gị gaa. Naanị na ọ bụghị gị ga-enweta otuto n’ihe a ị na-aga, n’ihi na ọ bụ nwaanyị+ ka Jehova ga-ewere Sisera resị.” Debora wee bilie soro Berak gaa Kidesh.+
10 Berak wee malite ịkpọkọta Zebulọn+ na Naftalaị ka ha gaa Kidesh, puku ndị ikom iri wee soro ya gbagoo;+ Debora sokwa ha gbagoo.
11 Ma Hiba+ onye Kenaịt kewapụrụ onwe ya n’etiti ndị Kenaịt,+ bụ́ ụmụ Hobab, ọgọ Mozis,+ o wee maa ụlọikwuu ya n’akụkụ nnukwu osisi dị na Zeananim, nke dị na Kidesh.
12 Ha wee kọọrọ Sisera na Berak nwa Abinoam+ agbagowo n’Ugwu Tebọ.+
13 Ozugbo ahụ, Sisera wee si na Haroshet nke ndị mba ọzọ kpọkọta ụgbọ ịnyịnya agha ya niile, narị ụgbọ ịnyịnya agha itoolu ndị nwere mma,+ na ndị niile so ya, ha wee gaa n’iyi ndagwurugwu Kaịshọn.+
14 Debora wee sị Berak: “Bilie, n’ihi na taa ka Jehova ga-enyefe Sisera n’aka gị. Ọ́ bụghị Jehova buteere gị ụzọ?”+ Berak wee si n’Ugwu Tebọ gbadaa, ya na puku ndị ikom iri so ya.
15 Jehova wee jiri ihu mma agha na-etinye Sisera na ụgbọ ịnyịnya agha ya niile na ndị agha ya niile n’ọgba aghara+ n’ihu Berak. N’ikpeazụ, Sisera si n’ụgbọ ịnyịnya wụtuo jiri ụkwụ gbawa ọsọ.
16 Berak wee chụrụ+ ụgbọ ịnyịnya agha ndị ahụ+ na ndị agha ahụ ruo Haroshet nke ndị mba ọzọ, e wee jiri ihu mma agha gbuo ndị agha Sisera niile. Ọbụna otu onye afọdụghị.+
17 Ma Sisera+ ji ụkwụ gbaga n’ụlọikwuu Jeel+ nwunye Hiba onye Kenaịt,+ n’ihi na udo dị n’etiti Jebin eze Hezọ+ na ezinụlọ Hiba onye Kenaịt.
18 Jeel wee pụta izute Sisera wee sị ya: “Bịawa ebe a, onyenwe m, bịakwute m ebe a. Atụla egwu.” O wee gbakwuru ya n’ụlọikwuu. E mesịa, o ji ákwà e ji achụ oyi kpuchie ya.
19 Ka oge na-aga, ọ sịrị ya: “Biko, kunyetụ m mmiri, n’ihi na akpịrị na-akpọ m nkụ.” O wee meghee karama akpụkpọ+ nke mmiri ara ehi dị wee nye ya ka ọ ṅụọ,+ o wee kpuchie ya ákwà.
20 O wee sị ya: “Guzo n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu a, ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na onye ọ bụla abịa jụọ gị, sị, ‘Ò nwere nwoke nọ n’ebe a?’ sị ya, ‘Ee e!’”
21 Jeel nwunye Hiba wee were mkpọ́ e ji maa ụlọikwuu ahụ, werekwa hama. O wee here ehere gakwuru ya wee kụnye mkpọ́ ahụ n’agba ntị ya,+ kụgide ya n’ala, mgbe ọ nọ n’oké ụra, mgbe ike gwụrụ ya. O wee nwụọ.+
22 Ma, lee! Berak nọ na-achụ Sisera. Jeel wee pụta izute ya, sị ya: “Bịa, m ga-egosi gị nwoke ahụ ị na-achọ.” O wee bịakwute ya, ma, lee! Sisera anwụwo, mkpọ́ ahụ ka dịkwa n’agba ntị ya.
23 Chineke wee si otú a merie+ Jebin eze Kenan n’ihu ụmụ Izrel n’ụbọchị ahụ.
24 Aka ụmụ Izrel wee na-adịwanye ike ibuso Jebin eze Kenan+ agha, ruo mgbe ha bipụrụ Jebin eze+ Kenan.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D7%26Chapter%3D4%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl